Nhọrọ Nhọrọ Teknụzụ - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
Nchọpụta / Nhọrọ Nhọrọ Teknụzụ
Nke a bụ ndepụta nduzi maka nhọrọ teknụzụ, ọ nwere nkọwa, uru na ọghọm na usoro ndị ọzọ dị n'okpuru, ị nwere ike ịlele ya maka nkọwa niile wee họrọ usoro kachasị mma.
Description: Stereolithography bụ mmako ationgha usoro na ahu nagide laser iji gwọọ mkpa n'ígwé na a vat nke mmiri mmiri UV-chebaara photopolymer. Model mkpebi nwere ike gbanwee site na-agbanwe agbanwe laser “ntụpọ size” na oyi akwa ọkpụrụkpụ. Nta ntụpọ size na oyi akwa ọkpụrụkpụ abawanye mkpebi, ma na-dịkwuo Mee oge na cost.SLA ụdị nwere ike post-esichara maka mgbanwe etoju nke imecha. Gụnye wepụ na-akwado ma na-ehicha akụkụ, sanded na beed-blasted, na-eme ka ha dabara maka nyocha nke injinia. LAdị SLA nwekwara ike mechaa ma chọọ ya mma iji nye ihe ngosipụta ziri ezi nke akụkụ ahụ.
Uru: Maka ụdị echiche ma ọ bụ usoro eji eme ihe dị ka nna ukwu maka usoro mgbakwunye ndị ọzọ, SLA usoro ngwangwa nwere ike iwepụta akụkụ nwere jiometrị dị mgbagwoju anya ma rụchaa elu dị elu ma e jiri ya tụnyere usoro mgbakwunye ndị ọzọ.
Ọghọm: Ule arụ ọrụ anaghị ekwe omume na akụkụ SLA, ebe ha na-adịkarị ike karịa akụkụ nke injinị. Akụkụ UV nke usoro ahụ na-eme ka akụkụ ndị nwere ike ibibi site na ikpughe anyanwụ. N'agbanyeghị na ị nwere ike ịmịpụta akụkụ dị mgbagwoju anya, usoro ahụ enweghị ihe ọ bụla na-egosi maka nrụpụta kachasị nke imewe ahụ.
Akụrụngwa dị: UV gwọrọ photopolymer, nke yiri ABS.
Ike Ike: Ogbenye
Opekempe mgbidi ọkpụrụkpụ: 0.5mm
Ihu mmecha: Ezigbo na oyi akwa ahịrị Post-Mee rụchaa
Max Ndidi: 0.10mm-0.15mm
Secondary imecha: sanding, Aja ọgbụgba ọkụ, Polishing, sere, Printing, agụụ plating
Bọchị Na-adịkarị Mepụta: 2-5 ụbọchị
Na-agbanwe Mpịakọta Mpịakọta: 1-10 Parts
Ahịa kwa Nkebi: Otu Nkebi
Moddị echiche: Ee
Ihe ngosi ngosi: Ee
Ọrụ Prototypes: Mba
Design & Engineering nkwenye: Limited
Nnyocha Ahịa Mbụ: Mba
Obere olu dị ala: Mba
Mgbakọ Mgbakọ na Nnyocha: Mba
Nkọwa: Usoro SLS na-eji laser iji wuo akụkụ site na sintering (fusing) ihe na-eme ntụ site na akwa site na ala elu. Akụkụ SLS na-arụpụta ihe nwere ike ịbụ ihe ziri ezi ma sie ike karịa akụkụ SLA, mana mmecha ahụ dara ogbenye nke nwere ọka ma ọ bụ aja. Ike dị ala n’etiti ihe ndị a gwakọtara agwakọta, ya mere akụkụ ndị ahụ ga-abụ ndị na-esighị ike karịa akụkụ ndị e ji arụ ọrụ ma ọ bụ nke ndị kpụrụ akpụ sitere na otu resin ahụ. Na mgbakwunye, enwere resins ole na ole dị n'ụdị ntụ ntụ achọrọ maka SLS.
Uru: Usoro nwere ike ime akụkụ dị mgbagwoju anya nke na-adịgide adịgide ma zie ezi karịa akụkụ SLA.
Ọghọm: Akụkụ ahụ nwere grainy ma ọ bụ ájá ájá ma ọ gaghị adabara maka ule na-arụ ọrụ n'ihi mbelata akụrụngwa ha. Ọ bụ ezie na SLS nwere ike ịme akụkụ na geometries dị mgbagwoju anya, ọ naghị enye nghọta banyere mmezi nke imewe ahụ.
Ngwongwo di: Laser gwọrọ naịlọn
Ike ọdụdọ: Fair
Opekempe mgbidi ọkpụrụkpụ: 0.8mm-1.2mm (na-adabere na geometry)
Max Ndidi: 0.10mm-0.20mm
N'elu Ikwusi: ike ike na udiri udiri Post-Mee agwụ
Secondary imecha: Sanding, Aja ọgbụgba ọkụ, Painting, Printing
Description: A siri ike ngọngọ nke plastic na-clamped n'ime a CNC machining na bee n'ime okokụre akụkụ. Usoro nhazi ngwa ngwa a na - emepụta ike dị elu na imecha ihe ọ bụla. O nwekwara ihe zuru ezu, homogenous Njirimara nke plastik, ma ọ bụghị usoro mgbakwunye na-eji ihe "plastik dị ka" ma wuo ya n'ígwé. Nhọrọ dịgasị iche iche nke ihe onwunwe na-enye ohere ka ejiri akụkụ ya rụọ ihe ndị achọrọ, dị ka: ike mgbagha, nkwụsi ike mmetụta, okpomọkụ na-ewepu okpomọkụ, nguzogide kemịkal na biocompatibility.
Uru: Na-arụpụta akụkụ ndị siri ike na ezigbo ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Kwesịrị ekwesị maka nyocha na nyocha. Enwere ike iji plastik, aluminom, magnesium, ma ọ bụ ọtụtụ ọla ndị ọzọ rụzie ụdị arụ ọrụ. ngwa ngwa n'ichepụta Prototypes nwere ike ịnapụta na ụbọchị dị ka mmako Filiks.
Ọghọm: Akụkụ jiometrị nwere ike ịbelata n'ihi ụdị ọrụ CNC. Usoro nwere ike ịdị oke ọnụ n'ihi na ndị mmemme na ndị ọrụ ọrụ dị mkpa iji mepụta CNC toolpaths na ndozi maka akụkụ ahụ.
Akụrụngwa dị: ọtụtụ akara ule injinia
Ike ọdụdọ: magburu onwe ya
Kacha nta mgbidi ọkpụrụkpụ: 0.5mm-0.8mm (na-adabere na geometry)
Max Ndidi: 0.05mm-0.10mm
Ihu Mmecha: Ezigbo elu ziri ezi Mwube nke-emecha
Secondary imecha: sanding, Aja ọgbụgba ọkụ, Polishing, sere, Printing, agụụ na Chemica plating, Anodizing, Powder mkpuchi
Bọchị Ndị Na-emepụta Ego: 3-8 ụbọchị
Na-agbanwe Mpịakọta Mpịakọta: 1-50 Parts
Prototypes na-arụ ọrụ: Ee
Design & Engineering nkwenye: Ee
Nnyocha Ahịa Oge: Ee
Obere olu dị ala: Obughi
Mgbakọ Mgbakọ na Nnyocha: Ee
Description: agụụ mgbatị bụ a ngwangwa prototyping usoro usoro na-mgbe ụfọdụ tinye n'ọrụ maka eke otutu ụdị iji otu ukwu nlereanya dị ka a ụkpụrụ. Masterkpụrụ nna ukwu, nke ejiri usoro SLA ma ọ bụ CNC wuru, emechara ma dezie ya iji mepụta ngwaahịa ikpeazụ. A na-awụsa roba Silicone na akụkụ ahụ, ma mgbe a gwọrọ ya, a na-ewepụ ụdị nnabata ahụ, na-ahapụ isi na oghere nwere ike ịmịpụta mkpụrụ iri abụọ na ise nke mbụ. A na - agbazi ebu ahu mmiri mmiri urethane thermoset nke nwere ike bụrụ ihe eji eme ya, na - ebute akụkụ ndị na - emepụta ihe dị ka ọdịdị, ma enwere ike iji ya maka nyocha na nyocha ọrụ, yana ụfọdụ ule pere mpe.
Uru: Na-enye gị ohere ịme ọtụtụ ụdị nke ụdị ngwa ngwa, ebe ị na-etinye ọtụtụ agba na agba dị iche iche. Wide iche nke n'ibu Njirimara na durometers. Mgbanwe silicone roba Ebu-enye gị ohere ịkpụzi ụfọdụ atụmatụ na-apụghị-akpụzi Conventionally enweghị pụrụ iche tooling, idebe-akwụ ụgwọ ala. Kpụrụ na ntinye na overmolds ga-ekwe omume.
Cons: Thermoset urethanes abụghị ndị nnọchianya nke ọgwụ a na-akpụzi thermoplastics. Nnwale arụmọrụ nwere oke. Ihe mgbanwe na ihe okike na ngwụcha nke nnabata nna ukwu, iwu ụlọ silicone, na de-ịkpụzi na imecha ihe nkedo nwere ike imetụta izi ezi.
Akụrụngwa Dị: Ọtụtụ polyurethanes, na-agbanwe agbanwe.
Ike ọdụdọ: Ezi
Opekempe mgbidi ọkpụrụkpụ: 0.6mm-1.0mm (na-adabere na geometry)
Max Ndidi: 0.05mm-0.15mm
Ihu Mmecha: ezigbo oke ziri ezi Mgbe emechara ụlọ
Pbọchị Ndị Na-emepụta Ejiri: 5-8 ụbọchị
Na-agbanwe Mpịakọta Mpịakọta: 10-100 Parts
Ọnụahịa kwa Akụkụ: Akụkụ Mpịakọta Dị Ala
Moddị echiche: Mba
Obere olu dị ala: Ee
Mgbakọ na Nnyocha Nyocha: Obughi
Nkọwa: Mgbe mmepụta ngwa ọrụ gị agaghị adị njikere maka ọnwa, ịkpụzi ngwa ngwa ịkpụzi ngwa ngwa bụ ụzọ dị mma iji nata ngwa ngwa na ọnụ ala. Nwere ike iji ọtụtụ ihe na usoro mepụta akụrụngwa akụrụngwa maka nyocha na nyocha. Enwere ike imepụta ihe eji eme ọsịsọ na nchara ígwè, aluminom, P-20 ma ọ bụ igwe eji arụ ọrụ dị elu. . Ọ bụrụ na ị dị njikere ịbanye na mmepụta, jiri ngwa ngwa na-agba ọsọ ọsọ, EDM, ihe nkedo nkedo ogwu, na nhọrọ dịgasị iche iche nke ihe. Na site na ịnye ngwa ngwa ngwa ngwa na ịkpụzi agịga ọnụ, ị ga-enweta ngwa ngwa gị dị mgbagwoju anya na ọnụ ala.
Uru: Nwere ike ịnapụta prototypes na obere-agba ọsọ prototype n'ichepụta mmepụta engineering-ọkwa thermoplastics ngwa ngwa, na-ebelata oge n'ahịa. Jiri nlezianya jikwaa ihe ize ndụ tupu ị banye n'ime mmepụta site na iji ohere nke mgbanwe iji mepụta akụkụ ọgwụ ndị ịkpụzi. Can nwere ike iji ngwa ọrụ a maka nrụpụta izizi ma ọ bụ dịka nhọrọ ndabere ma ọ bụrụ na ngwa ọrụ mmepụta gị na-egbu oge ma ọ bụ na-eche mgbanwe.
Ọghọm: "Ngwá ọrụ na-akwụ ụgwọ nwere ike ime ka usoro a dị ka ndị dị oke ọnụ karịa ndị ọzọ na nyocha mbụ, mana ụgwọ ọ bụla gwụchara na-adịkarị ala karịa usoro mgbakwunye ma ọ bụ ọrụ CNC.
Akụrụngwa dị: thermoplastics niile
Max Ndidi: 0.02mm-0.05mm
Elu imecha: ezigbo ezigbo ziri ezi Ọ dịghị onye chọrọ
Secondary Mmecha: All gụchara dị
Bọchị Oge Emepụtara: 15-35 ụbọchị
Na-agbanwe Mpịakọta Mpịakọta: 100-50000 Parts
Ọnụahịa kwa Akụkụ: Nrụpụta Mpịakọta Dị Elu
CNC Prototyping, CNC Rapid Prototyping, Otito Prototyping, Otito Prototyping na Manufacturing, Fast Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services,